Famonosana ny famonosana ny ony Kalamazoo amin'ny fitrandrahana ny famonosana ny laoniny
COMSTOCK TOWNSHIP, MI - Ity no fahavaratra farany iasan'ny Reniranon'i Kalamazoo amin'ny toerana fanaovana asa dredging mavesatra, satria ny Enbridge Inc. dia manadio ny fikorontanan'ny rano avy amin'ny fantsakan-tsiranoka izay nandefa menaka crude 800,000 XNUMX litatra ho any Talmadge Creek sy ny renirano.
Efa ho efa-taona taty aoriana, satria hita ny jona 26, 2010 akaikin'i Marshall, ny orinasa pipeline kanadianina dia nanapotika ny fanadiovana.
Ann Nieuwenhuis, Mpanohana ny Kaominin'i Comstock dia nilaza fa ny asa any amin'ny tanàna atsinanan'ny Kalamazoo County dia mitarika ny sain'ireo tsy fahita amin'ny besinimaro ary toa tsy nisy dikany.
"Isaky ny tapa-bolana ny (maso ivoho miaro ny tontolo iainana amerikana) mandrindra ny fivorian'ny mpiray tsikombakomba ao Marshall izay atrehiko mivantana na an-telefaona," hoy i Nieuwenhuis. “Roa herinandro lasa izay dia nangataka handeha tany amin'ilay tranonkala aho. Ny hevitro dia manana ny kinova Cadillac (asa dredging) isika. Nametraka eritreritra be momba ny fomba hananganana azy ilay mpampirohy «, hoy izy, ka nahatonga fandidiana mangina, mandaitra ary azo antoka.
"Izy ireo dia kendrena amin'ny fandaharam-potoana nomenay ho azy ireo, ary matoky aho fa haverina amin'ny toerany ny tany tamin'ny faran'ny volana novambra (izany hoe ny faran'ny volana novambra), izay ny fifanarahana nifanarahana," hoy i Nieuwenhuis.
Nilaza i Jason Manshum, mpitondra tenin'i Enbridge, fa rehefa vita ny fitrandrahana tany voaloto amin'ny delpà Morrow Lake, dia antenaina fa amin'ny tapaky ny fahavaratra dia ho vita ny asa izay naseho tamin'ny alàlan'ny baiko 2013 tamin'ny volana martsa. Mitohy amin'ny famoahana ny famerenan'ny renirano Riverbank amin'ny alàlan'ny rano eran-tany 35 kilometatra iray any Calhoun sy Kalamazoo izay nifototra tamin'ny fanadiovana ny fandroahana, hoy izy.
Hatramin'ny famoahana solika solika mavesatra avy amin'ny rafitry ny fantsom-panafody Enbridge, dia niara-niasa ny fanjakana sy ny fanjakana federaly hanara-maso ny fikojakojana sy fanesorana solika avy amin'ny tontolo manodidina.
"Izahay dia mitondra tany sy zavamaniry ary hazo teratany hanamboarana toerana maitso mahafinaritra toa ny tsy nisy raraka tany," hoy i Manshum, "isaky ny fifanarahana nataontsika tamin'ny (Departemantan'ny fitoviana momba ny tontolo iainana sy ny Michigan Departemantan'ny harena voajanahary any Michigan). ”
Avy eo, ankoatry ny fanaraha-maso ny tontolo iainana maharitra, ho vita ny asan'i Enbridge, hoy i Manshum. "Raha misy filàna miresaka ny faritra iray manokana (hiverina izahay), fa raha ny fahafantarantsika azy dia eo amin'ny dingana farany isika."
Ny orinasa tamin'ny voalohany dia nanantena ny ho vita amin'ny asa fanondrahana ao amin'ny Morrow Lake amin'ny faran'ny 2013, saingy nanana olana tamin'ny fikarohana tranonkala azo ekena ho an'ny paded dredge mba hitazonana azy ireo vetivety alohan'ny handroahana azy io. Tamin'ny volana febroary dia nahazo fankatoavana avy amin'ny Komity miadidy ny tanànan'ny Comstock ny fametrahana dredge pad tao Benteler Industries, izay mipetraka eo avaratry ny farihy amin'ny East Michigan Avenue.
Ny fankatoavana izany dia nijanona teo amin'ny Enbridge tamin'ny alalàn'ny kamio iray izay nialana ny làlan-kaleha tao Michigan Avenue sy King Highway, hatramin'ny kamiao 200 in-droa fandotoana voaloto avy any amin'ilay toerana mankany amin'ny fivondronan-tany ankatoavina. Ny toe-javatra iray hafa dia ny nametrahan'i Enbridge fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny kalitao amin'ny kalitao ao akaikin'ny Fleetwood Neighborhood akaiky.
Hatramin'ny nanombohan'ny asa fisokirana, hoy i Nieuwenhuis, "indroa ihany isika no niantso - ny 22 aprily dia nitaraina ny olona sasany momba ny fofon-tsela. Kamiao marobe no niditra sy nivoaka satria io no andro voalohany nesorina ny fameperana ny lanjany. ”
Indray andro iray nisy olona iray nitaraina fofona manitra fofona, hoy izy.
Ny asa vita amin'ity fahavaratra ity dia tsy hita amin'ny manodidina ny Fleetwood, afenin'ny earthen berm, ary ny rivotra sy ny tabataba dia harahi-maso mba hiantoka izay tsy miditra ao amin'ny kompleks Wenke softball ao amin'ny River Oaks Park.
Ny kamio dia nampiseho ny fanarahana mafy ny làlana nankatoavin'izy ireo, hoy i Nieuwenhuis. "Hatreto, tena tsara," hoy izy.
Fiakarana sy akaiky ny toerana misy ny fitsangantsanganana fantsom-pifandraisana, izay nanombohan'ny fandatsahan-drano sy ny fanadiovana hafa, ny fanjakana dia tena voarohirohy amin'ny fiambenana ny famerenana ny renirano, hoy i Michelle DeLong, Lehiben'ny Unit Enponseur Response ho an'ny Diviziona misahana ny rano MDEQ. Izany dia mitaky fandrefesana ny sisin'ny fantsona, mametaka vatan-kazo miaraka amina rafitra mamatotra mba hamoronana toeram-ponenana trondro, fananganana dobo riffle miaraka amin'ireo faritra be vato ary mametaka borosy eo amoron'ny ony. Ny fambolena dia hatao amin'ny faran'ny fahavaratra sy ny fahalavoana.
Ankoatr'izay, ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana dia "mbola manara-maso ary hiara-hiasa amin'i Enbridge satria miala ny tranonkala ny EPA rehefa vita ny dredging," hoy i DeLong.
"Amin'ny fotoana sasany, rehefa handao ny tetikasa ny EPA US dia hanomboka ny programa fanaraha-maso sy fanombanana maharitra izahay miaraka amin'ny Departemantan'ny kalitaon'ny tontolo iainana any Michigan," hoy izy.
Steve Hamilton, filohan'ny Filankevitra Watershed on Kalamazoo dia nilaza fa ny fahatsapany ny fanatrehana ireo fivoriana stakelholder tsy tapaka ary ny fitsidihana ny hetsika fanondranana drà Morrow Lake herinandro vitsy lasa izay dia ny fimailana farany dia mandeha tsara.
"Enbridge sy ny mpifanaraka aminy, ary koa ny EPA sy DEQ, dia nianatra zavatra betsaka tamin'ny fanandramana niaina tany an-kafa tany amin'ny rafitry ny renirano, ary namolavola rafitra namboarina tsara ho an'ny toe-javatra misy eo an-toerana," hoy izy. “Ary toa mazava amiko fa tsy nitsitsy vola izy ireo mba hikarakarana araka ny tokony ho izy ny fitaovana ary hiantohana fa tsy olana ny famoahana rivotra. Ka tsy misy fitarainana raha ny fijeriko azy. ”